Fadhiga baarlamaanka oo dib loo dhigay - BBC News Somali
Fadhiga baarlamaanka oo dib loo dhigay
Image caption Cumar Cabdirashiid Cali-Sharma'arke
Codbixinta kalsooni loogu qaadi lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, oo lagu waday in ay maanta dhacdo ayaa dib loo dhigay.
Guddoomiyaha baarlamaanka, Shariif Xassan Sheekh Aadan, ayaa go'aankan ku dhawaaqay. Ma jiro waqti rasmi ah oo uu u qabtay qabsoomidda fadhiga baarlamaanka.
Ra'iisul wasaare, Cumar Cabdirashiid, ayaa si xoog leh loogu dhaleeceeyay in uu ku guuldaraystay in uu wax ka qabto kacdoonka sii xoogaysanaya ee Islaamiyiinta gudaha Soomaaliya, waxaana baaqyada loogu soo jeedinayo in u u xilka ka dego horkacaya madaxwayne Sheekh Sharif.
Madaxwayne Sheekh Shariif, ayaa shalay booqasho gaaban oo deg deg ah ku tagay dalka Uganda, oo wararku sheegayaan in uu kula kulmay madaxwaynaha dalkaas, Yuweri Museveni, lama oga waxa rasmi ahaan ay ka wadahadleen balse waxaa loo malaynayaa in ay wadahadaladoodu la xiriireen khilaafka madaxda sare ee dowladda.
Madaxwaynaha ayaa saaka dib ugu soo ugu soo laabtay Muqdisho.
Dowladda taagta daran ee aan cagaha badan ku taagnayn, ayaa si xoog leh ugu tiirsan taageerada ciidamada midowga africa, oo ilaa hadda ka soo jeeda dalalka Uganda iyo Burundi oo kaliya, kuwaasi oo tiradoodu gaarayso in ka badan 6 kun oo askari.